Global Voices teny Malagasy » Kenya: Domberina An-tSerasera Noho ny Fanafihana Grenady Avy Amin’ny Al Shabaab · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Oktobra 2011 21:48 GMT 1	 · Mpanoratra Collins Mbalo Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika
Nanafika  ny vondrona mitam-piadiana Somali Al Shabaab  ny tafika keniana vao tsy ela izay ka ny anaran'ny fanafihana dia midika hoe “Operation Linda Nchi”  amin'ny teny Swahili na Operation Fiarovana ny Firenena. Nampanatena ny Al Shabaab taorian'ny fanafihana fa hanafika an'i Nairobi.
Efa nahitana fanafihana tamin'ny alalan'ny grenady indroa nahafatesana olona tao an-drenivohitr'i Kenya, Nairobi : ny iray tao amin'ny toerana fialamboly malaza  ary ny hafa kosa tao amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana be olona  tao an-tampon-tanàna.
Niteraka resabe an-tserasera izany fanafihana anankiroa izany. Vinavina Nairobiana nanolotra “Toro-hevitra Hisorohana Amin'ny Fanafihana Amin'ny Grenady” :
Toerana nahitana ny fatim-by tamin'ny grenady. Nairobi, Kenya. Sary avy amin'i Jonathan Kalan, copyright © Demotix (24th October 2011)
Ity no fitantarana ahy manokana ka ataoko soratra matevina izany satria tsy rototra ny ankamaroan'ny Kenyana rehefa misy loza mitranga } Aza mankany amin'ny toerana nisiana fanafihana mpampihorohoro mba hitazatazana. Tian'ny mpampihorohoro ny mamely fanindroany hamonoany polisy sy mpamonjy voina araka izay betsaka indrindra. Mety hanelingelina amin'ny famonjena voina sy ny fanangonana porofo koa ianao!
Gukira mampitandrina ny amin'izay mety ho fiakaran'ny toe-tsaim-pankahalana na fanavakavahana  ireo Somalis teraka Kenyana:
Tao amin'ny JKIA (Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jomo Kenyatta), nijery ahy ny vehivavy Somali iray, nitsiky tamin'ny namany, nihevitra ahy ho fianakaviana, nanomboka nanontany ahy, fa tsy tamin'ny teny anglisy. Nitsiky tamin'alahelo aho, nanozona ny fahaizako fiteny voafetra, niaiky fa tsy Somali aho: fa tahaka azy ihany. Nitsiky tamiko indray ary nanaiky fa tahaka ny Somali tokoa aho.
Nitantara ity tranga ity tamin'ny reniko aho: niteny tamiko izy hiteny Gikuyu ampahibemaso. Tsy nanan-kavaly aho. Ary indrindra tsy nanana tsiky hozaraina.
Misy mamelona sy manamafy ny fitiavana manokana ny fokom-pirenena. Tantara maro no manomboka mitsonika, hanamarinana ity ady ity, satria mandrahona ny Al Shabaab-Somalis.
Mangalatra kopia nahaterahana avy amin'ny zaza Keniana ry zareo.
Miaina any Eastleigh, any amina “firenena anatina firenena,” mandà ny hifaningotringotra.
Midify ny lalànan'ny fifindra-monina ry zareo ary ataony tandindonin-doza ny firaisam-pirenena.
Manambola maro loatra ry zareo, angamba avy amin'ny fivarotana fitaovam-piadiana.
Mandrahona ny orinasam-pizahantanintsika.
Tsy nafenina fa miha-miseho masoandro ny fankahalana ny Somali, na dia milaza amintsika aza ny filohantsika fa ady amin'i Al Shabaab atao fa tsy amin'i Somalia na ny Somalis. Manontany tena aho raha mahay manavaka tahaka izany ny baomba natsipy.
Toa tahaka loko iray ihany no ifankafantarana dia maitso izany: mandehana mamono, baiko izany.
Wamathai nandefa fihetseham-po mitovy tahaka izany :
Polisy Kenyana nanadio ny potin-javatra tamin'ny fipoahana tao Nairobi, Kenya. Sary: Jonathan Kalan, copyright © Demotix (24th October 2011)
Ny rahalahinay any Eastleigh, ao Avaratra Atsinanana, ao Nanyuki, Mombasa, lamu ary ny ao Nakuru (Tanàn-dehibe an'i Kenya) no ahiana ho tandindonin-doza ao an-toerana. Maro amin'izy ireo, mbamin'ny rainy sy ny reniny, no nandamina ny ny làlantsika tamin'ny fanaovana polisy, niady ho an'i Kenya nandritra ny taompolo 1960 tao anatin'ny tafika. Izy ireo no tafika tsara fiofanana indrindra, antokon-tafika niady tamin'ny halatr'omby, tsy maintsy nilaina. Maro tamin'izy ireo no nanao sorona ny ainy, amin'izao fotoana izao ao Kismayu nefa voatsiratsira sy ambanimbaniana ny fianakavian'izy ireo ao Eastleigh. Tsy afaka miaro ny fianakaviany izy ireo. Tsy mila manaporofo ny fifkirany amin'ny firennea ry zareo. Eo amin'ny kianja tsy fantatra isika aryny fihetsika ataontsika amin'ireto rahalahy sy anabavintsika ireto no hamaritra ny hoaviantsika iraisana.
Toerana nahitana fatim-by tamin'ny grenady hita tao. Nairobi, Kenya. Sary: Jonathan Kalan, copyright © Demotix (24th October 2011)
IddSalim nanontany ny antony miafina  nahatonga ny fanafihana ara-miaramila Kenyana sy ny nanaovana izany tamin'ny fotoana mety indrindra:
Voalohany indrindra, tsy mankasitraka ny “ady” hampifandrina an'i Kenya sy Somalia aho. Tsy naharesy azy ireo amin'ny baolina fandaka isika ary mifanao ara-kiafina kilalao fanaony isan'andro aminy isika? Kanefa TSY izany no antony tsy hanohanako izany. Milisy Somaliana (Avy any Somalia, Fa tsy Kenya) no namono Kenyana tao amin'ny faritra Avaratra-Atsinanana nandritra ny taona maro. Tsy misy fandraisana andraikitra lehibe vita. Saingy raha vao Eoropeana (Ny Andriamanitsika) no nalaina an-keriny, mailaka aoka izany manangana ady mahenika faritra maro. Aiza ny hambom-po-pirenentsika? Nahoana no omentsika lanjany bebe kokoa ny ain'ny mpizahatany noho ny aintsika? Tsy mitovy daholo ve ny olombelona?
Tao amin'ny Twitter, nalaza ny teny hoe Grenady tao amin'ny Trendsmap Nairobi .
SKibuchi mampahatsiahy antsika ny hira malaza an'i Bruno Mars  :
al shabaab tsy afa-manajanona ahy fa manana an'i Bruno Mars aho hisambotra ny grenady ho ahy
Raha nanontany ireo Kenyana sasany raha mbola hisy ny fanafihana na tsia, efa nandray fepetra kosa ny mpiserasera Kenyana hifampahery fa tsy hifandranitra amin'ireo mpiray tanindrazana aminy manana fiaviana somali
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/27/24540/
 Al Shabaab: http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shabaab
 “Operation Linda Nchi”: http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Kenyan-Somalian_operation_%282011%29
 tao amin'ny toerana fialamboly malaza: http://www.capitalfm.co.ke/news/2011/10/14-injured-in-nairobi-grenade-attack/
 tao amin'ny fiantsonan'ny fiara fitaterana be olona: http://www.capitalfm.co.ke/news/2011/10/one-killed-as-another-blast-rocks-kenyan-capital/
 “Toro-hevitra Hisorohana Amin'ny Fanafihana Amin'ny Grenady”: http://siku-moja.blogspot.com/2011/10/tips-on-how-to-survive-hand-grenade.html
 toe-tsaim-pankahalana na fanavakavahana: http://gukira.wordpress.com/2011/10/24/credible-threat/
 nandefa fihetseham-po mitovy tahaka izany: http://www.wamathai.com/2011/10/unspoken-kenyans-reaction-to-the-war-and-nairobi-bombings/
 nanontany ny antony miafina: http://www.iddsalim.com/blog/2011/10/25/now-everybody-just-calm-the-fk-down/
 Trendsmap Nairobi : http://trendsmap.com/local/ke/nairobi#
 Bruno Mars: http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Mars